Sidee dhabarka sare ee kaalmadu kaa caawin karaa inaad ka dhigto content aad u aragto macaamiishaada iman kara?
Dhismaha xidhiidhka waa fursad fiican oo loogu talagalay rikoodhka. Si loo dhiso xiriirro tayo sare leh waa fure marka ay timaado muuqaalka kobcinta muuqaalka bogga. Dhismaha xidhiidhka wuxuu ahaa, waana, oo noqon doona tilmaanta hoose ee Google. Taasina waa sababta qodobkeenu u go'an yahay hababka waxtarka leh ee loo heli karo dib-u-celin heer sare ah.
Xiriirinta xiriirka waa halka aad ku dhisto xiriirro ilaha webka ee kale ee ku soo noqda adigaaga. Dhismaha xiriirka, waxaad sidoo kale abuuri kartaa xiriirro ku yaal boggaaga oo tilmaamaya meelo kala duwan oo ka baxsan. Iyada oo la abuuro waxyaabo badan oo dib u qaabeyn ah dabeecaddan, waxaad awoodi doontaa inaad dhisato shabakad. Haddii qadarka ugu weyn ee isku xirnaanta dibadda ee tilmaamaya boggagaaga ay ka yimaadaan meele sare oo magac leh, magacaagu wuxuu kor u qaadi doonaa qiimaha wuxuuna sare u qaadi doonaa natiijooyinka raadinta.
Waxaa jira habab badan oo kala duwan oo loo helo isku xirnaanta xiriirrada. Qaar badan oo ka mid ah hababkaas ayaa lagu foogan yahay waxaana laga yaabaa inay goobtaada ka mamnuucaan. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad diirada saarto fiirintaada farsamooyinka SEO-ka ah si aad u samayso dhisidda isku-xidhka.
Sida loo daro content ee Google?
Xilliga ugu muhiimsan ee aad u baahantahay waa inaad kor u qaaddo maamulka goobtaada iyo wacyigelinta caanka ah. Ma aha mid aad u adag sidii aad u malayn karto. Waxaad ubaahan tahay inaad abuurto maqaalo dheer oo mawduucyo la xariira dhegeystayaashaada. Tusaale ahaan, tayada ku salaysan cilmi-baarista, qaybo mug leh oo qoto-dheer oo ka jawaabaya macaamiisha suurtogalka ah ee buuxa su'aalaha.
Maxaad ka badan tahay, waxaad u baahan tahay inaad dhisato tayo sare leh, dib-u-habboon oo ku saabsan mawduucan. Xidhiidhka xiriirka ah ee aasaasiga ah ayaa lagama maarmaan u ah abuurista gaadiidka. Waa wax aan suurtagal ahayn in lagu daro content iyada oo aan wax xiriirin ah oo tilmaamaya.
Sidee loo helaa backliters sare?
Backlinkaagu wuxuu u baahan yahay in si sax ah loo qaabeeyo iyada oo ka badan sidii loo fiicnaan lahaa si xun u saameeya goobtaada.
Cilmi-badhayaasha caanka ah ee websaydhku waxay ku sameeyaan dhisme isku-xiran waa qoraal adag oo sax ah. Waxaad u baahan tahay inaad isku daydo inaad isticmaasho ereyada kaladuwan ee loogu talagalay kumbuyuutarrada si aad u muujiso makiinadaha raadinta kala duwanaanta kala duwanaanta. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato cayaarta saxda ah ama xirmo ganacsi.
Nooca kale ee dhabarka ah ee aad u baahan tahay inaad dareen gaar ah siiso waa isku xirnaanta ku jirta. Waxay ka yimaadaan blogyada la xiriira iyo boosteejada martida. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo isku dhafan dabiiciga ah raadinta dabiiciga ah, loola jeedo, iyo kuwa hooseeya iyada oo la adeegsanayo kala duwanaansho dhaadheer marka la abuuro isku xirnaanta.
Hagaajinta heerka darajada waxay noqon kartaa waqti wakhti qaadaya. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad dhisto saldhig wax ku ool ah, waxaad bilaabi kartaa inaad abuurto tayo tayo leh, dib-u-taakuleyn xooggan oo leh qalab isku xiran. Sidaan horey u soo sheegnay, waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso soo celinta qoraallada qalabka ah sababtoo ah qoryaha baaritaanka ayaa soo jiidan kara sida spam.
Waxaa jira tallaabooyin badan oo aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u abuurto shabakad tayo sare leh. Tallaabooyinkan waxaa ka mid ah codsashada dhabarka; dhisaan xiriir wanaagsan oo lala yeesho joornaalada la xidhiidha joornaalada iyo websaydhka; dib-u-eegis rasmiya oo lala yeesho xiriirada dibadda; abuuro bartaada oo aad caan ka dhigto; la wadaagaan xiriirkaaga warbaahinta bulshada ee caanka ah Source .